Allah Ayaa Ii Rumeeyey Riyadaydii, Ducadaydiina Wuu Ii Aqbalay, Ilaahow Nagu Hoggaami Jannada – Farriin Quluubta Muslimiinta Soo Jiidatay Oo Ka Timid Khabib Nurmagomedov
November 17, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov ayaa si weyn u qabsaday quluubta dadka Islaamka ah kaddib markii uu Illaahay weydiistay inuu jannada ku geeyo camalka wanaagsan ee uu sameeyo.
Khabib Nurmagomedov oo dhowaan tegay waddanka Nigeria ayaa waxa uu ka aasaasay xarumo caafimaad iyo biyo gellin uu ka sameeyey deegaamo Muslimiintu ku nool yihiin, waxaanu ballan-qaaday in afar bilood kaddib uu ku laaban doono dalkaas oo uu ka hirgelin doono mashaariic kale oo uu hore usii qorsheeyey.
Arrintan oo si weyn ay ula dhaceen Muslimiinta oo horeba ugu faraxsanaa sidii uu u garaacay feedhyahanka Ingiriiska ah ee McGregor oo aflagaadeeyey diinta Islaamka iyo waalidka Khabib, ayaa ka hor intii aanu hirgelinteeda u tegin Nigeria waxa uu safaro ku tegay dalal Islaam ah oo ay ku jiraan Imaaraadka Carabta iyo Turkey, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha Racep Tayyib Erdogan iyo masuuliyiin kale. Arrintan oo si weyn ay gaaladu uga gilgisheen, warbaahintooduna weerareen feedhyahanka Muslimka ah oo ay ku tilmaameen inuu la kulmay kalitaliyeyaal iyo argagixiso, si khaldana uu uga faa’iidaystay guushii uu ka gaadhay McGregor, ayaa waxay mar kale ku war heleen isaga oo caawinaya Muslimiinta Nigeria.
Farriin cusub oo uu ku baahiyey bartiisa bulshada ee Instagram oo ay kala socdaan dad tiradoodu ka badan tahay 13 milyan oo qof, ayaa waxa uu ku sheegay in illaa yaraantiisii uu ku riyoon inuu wax u qabto carruurta Afrika oo uu caawiyo, taasna uu Illaahay u rumeeyey.
Farriinta oo aanu afsoomaali usoo turjumeen ayaa waxa uu ku yidhi sidan:
“Waxay ahayd riyadaydii carruurnimadii, Ilaahay ayaannan ka baryi jiray inuu isiiyo fursad aan ku caawiyo carruurta Afrika.
Alxamdulillah ducadaydii wuu iiga soo jawaabay.
Insha Allah waxa aan doonayaa inaan soo laabto (ku laabto Nigeria) afar bilood kaddib oo aan furo mashaariic aan hore u qorsheeyey.
Illaahayow ka yeel camalkayaga kuwo sax ah, naxariistaadana noogu hoggaami jannada.”